सन्दर्भ विश्व हाँसो दिवस ः हेर्नुहोस् हाँसो थाम्न नसकिने केही तस्बीरहरु – Green Ilam
सन्दर्भ विश्व हाँसो दिवस ः हेर्नुहोस् हाँसो थाम्न नसकिने केही तस्बीरहरु
in मनोरन्जन, समाज
इलाम, २१ वैशाखः आज २२ औं विश्व हाँसो दिवस । यसको इतिहास लामो नभएपनि यसलाई विशेष गरी मन खोलेर हाँस्ने दिन मानिन्छ । पछिल्लो केही वर्षबाट नेपालमा पनि यो दिवस मनाईँदै आएको छ । सन् १९९८ मा भारतका एक वरिष्ठ डाक्टरको पहलमा मनाइन थालिएको यो दिवसलाई मे महिनाको पहिलो आईतबार मनाईने गरिन्छ । हाँसोको माध्यमबाट विश्वमा शान्ति फैल्याउन सकिने तथा विश्व मानवमा मित्रताको भावा व्यक्त गर्न सकिने उद्देश्यले यो दिवस मनाउन थालिएको जानकारहरु बताउँछन् ।
खीतखीत गर्दै खीत्का छाडेर, अट्टाहसका साथ, या मनमनै, कोही मुसक्क अनि कोही फुसुक्क, के होला सोच्नुस त ? आज हामी हाँसोको कुरा गर्दैछौं । अलिक दार्शनिक कोणाट हाँसोलाई पस्कन मन लाग्यो, विश्वको सबैभन्दा महँगो कुरा हाँसो । यी हाँसोलाई किन्नका लागि हामीले सकल जीवन खर्च गर्दछौं, हाँसो अझ एउटा यस्तो महँगो गहना जसको खोजीमा मान्छे जीवनभर भौतारिन्छ अनि भौतारिरहन्छ । एउटा सानो फिरफिरे पाउँदा मात्र पनि एउटा बालक हाँस्दछ, मिठो मधुर अनि हजारौं रुपैयाँले पनि किन्न नसक्ने हाँसो । सन्तानसँग भेट्न पाँउदा एउटी आमा हाँस्दछिन्, करोडौंले पनि खरिद गर्न नसक्ने अर्को हाँसो ।
अनि लाखौं, करोडौं बैंक ब्यालेन्स लिएर बसेको एउटा मान्छे महँगो गाडीमा सुकिलो कपडा लाएर पनि मिठो खानेकुराको भोगमा पनि एक पित्को हाँसो हाँस्न सकिरहेको हुँदैन् । हाँसो एउटा यस्तो कडी हो जसले धनीलाई गरिब अनि गरिबलाई पनि धनी बनाउँदछ । महाकविले लेखेकै छन् । गरिब भन्छौ सुखको मै छु धनी मिल्दैन कतै पनि यो एउटा वाक्याशंले हाँसोको अपार ब्याख्या गरेको छ, गरिबलाई धनी अनि धनीलाई गरिबमा छुटाउने काम हाँसोले गर्दछ । डोको बोकेको भोको पेट नै भए पनि पीपलको बोट मुनी सुस्ताँउदै एउटा मिठो सुस्केरा सहितको गीत गाई दिन्छ अनि हाँस्दछ अरबौंको हाँसो ।
हाँसोको यो समीकरणमा उदाहरण सदैव आँउदछ कमलको फुलको अनि गुलाफको फुलको । चाहे हिलोमा होस् या काँडाभित्र ? तर फुल त मुस्कुराँउछ नै, हाँस्छ नै । नारायण गोपालले गाएका गीत उल्लेख गर्न चाह्यौं । फाँटहरुले कसलाई पुग्छ भीरमा पनि फुलिदिन्छु, म त लालीगुराँसै भएछु । हाँसोको कुरामा हामी सबै फुल अनि लालीगुराँस झैै हुन जरुरी छ । फाँटहरुले मात्र कहाँ पुग्छ र ? भीरहरुमा पनि हास्न सक्नुपर्दछ । अब हाँसोको यतिका कुरा गरिसक्दा अब आआफुले आफुलाई नै प्रश्न गरौं हाम्रो जीवनमा हाँसोहरु कति उधारो राखेका छौं भनेंर ? हाँस्न नभुलौं है । दिल खोलेर हाँसौ, हसाउँन सकौं ।
यसै सन्दर्भमा सामाजिक सञ्जालमा भाइरल बनेको हाँसो नै थाम्न नसकिने तस्बीरहरू हुन्छन् । त्यस्तै तस्बीर विभिन्न वेभसाइटबाट लिएर हाँसो दिवसको अवसरमा हसाउँने प्रयास गरेको छौँ ।
Tags: सन्दर्भ विश्व हाँसो दिवस ः हेर्नुहोस् हाँसो थाम्न नसकिने केही तस्बीरहरु
इलाम नगरपालिकाद्वारा खानेपानी महसुल र सटर भाँडामा २० प्रतिशत छुट